ह्वावेको हार्मोनी ओएसले के एन्ड्रोइड र आईओएससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
ह्वावेको हार्मोनी ओएसले के एन्ड्रोइड र आईओएससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ?
काठमाडौं । गत बुधबार ह्वावेकाे बहुप्रतिक्षित अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी ओएस सार्वजनिक भयाे । ह्वावेकाे इन-हाउस डेभलपमेन्ट रहेकाे याे अपरेटिङ सिस्टम स्मार्टफाेन र स्मार्ट डिभाइसका लागि प्रयाेग गर्न सकिने जनाइएकाे छ ।
तर याे प्रश्न उठिरहेकाे छ कि, के हार्माेनी अपरेटिङ सिस्टमले गुगलकाे एन्ड्राेइड र एप्पलकाे आईओएससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला त ? अहिले बजारमा वास्तवमा एन्ड्राेइड र आईओएसकाे ‘डुओपोली’ अर्थात् ९९ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । यस्ताे अवस्थामा हार्माेनी कसरी अगाडि बढ्न सक्ला त ?
ह्वावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम ल्याउन खोजेको सन् २०१२ देखि नै हो । त्यतिबेला कम्पनीका संस्थापक रेन जेङफेई र अन्य कार्यकारी अधिकारीहरुले वैकल्पिक अपरेटिङ सिस्टमका बारे छलफल गरेका थिए । उनीहरुले त्यतिबेलै एन्ड्रोइडमा निर्भर हुन नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
नभन्दै त्यसको ७ वर्षमा डोनाल्ट ट्रम्पको अमेरिकी प्रशासनले ह्वावेलाई अमेरिका नियन्त्रित कम्पनीका सेवाबाट प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसपछि कम्पनीलाई ठूलै झड्का लाग्यो । स्मार्टफोनमा आधिपत्य जमाउँदै गएको ह्वावेले धेरै ठाउँबाट हात धुनुपर्यो ।
अमेरिकाले सन् २०१९ मा ह्वावेलाई कालाेसूचीमा राखे लगत्तै कम्पनीले हार्मोनी ओएस ल्याएको थियो । तर, यो पूर्णरुपमा गुगलको एन्ड्रोइडमै आधारित भएर निर्माण गरिएको थियो । तर, सँगै ह्वावेलाई अमेरिकी कम्पनीले निर्माण गरेको कुनै पनि प्रडक्ट प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध गरियो । त्यसपछि कम्पनीले एन्ड्रोइडमा आधारित भएर हार्मोनी ओएस विस्तार गर्ने अवस्था रहेन ।
उसले सन् २०१६ बाटै हार्मोनी ओएस निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । एन्ड्रोइडको ब्याकअपका रुपमा विभिन्न आईओटीमा आधारित डिभाइसमा हार्मोनी ओएस प्रयोगमा ल्याउँदै आएको थियो ।
अब कम्पनीले त्यसलाई अझ परिस्कृत गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अब यसमा आधारित भएर डेभलपरहरुले सहज रुपमा विभिन्न प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
ओपनसोर्सको रुपमा उपलब्ध गराइएको हार्मोनी ओएस गुगलको एन्ड्रोइड, एप्प्लको आईओएसभन्दा पूर्णरुपमा फरक रहेको छ । यो ओएस हाल कनेक्टेड डिभाइसको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको छ । यसले हाल एप्पलको जस्तै आफ्नै छुट्टै प्लेटफर्म निर्माण गरी प्रयोगकर्तालाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ ।
स्मार्टफोन र अन्य स्मार्ट डिभाइसका लागि हार्मोनी ओएस
सन् २०१९ मा ह्वावेले हार्मोनी ओएस पहिलो पटक स्मार्ट टिभीमा प्रयोग गरेको थियो । जुन अनर ब्राण्डको टिभी थियो । तर, बुधबार कम्पनीले हार्मोनी ओएसमा आधारित फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन मेट ४० र मेट एक्स२ फाेल्डेबल फोनमा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै ह्वावेको वाच सिरिज ३ र मेट प्या प्रो ट्याब्लेटमा समेत हार्मोनी ओएस प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
सन् २०१९ मा अमेरिकारले लगाएको प्रतिबन्धपश्चात ह्वावेका कुनै पनि फोनमा एन्ड्रोइडको अपडेट उपलब्ध भएको छैन । तर, अब ह्वावेका पुराना फोनमा पनि हार्मोनी ओएस अपडेट गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो अपडेट बुधबारबाटै सुरू भएको छ भने यो वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण कम्पनीको आम्दानी सन् २०२० को अन्त्यमा आएर घटेको छ । स्मार्टफोन बजारमा लागेको ठूलाे धक्काका कारण कम्पनीले ठूलो आम्दानी गुमाउन पुग्यो । जसले गर्दा कम्पनीले अन्य इलेक्ट्रिक डिभाइसमा आफूलाई विस्तारै केन्द्रित गर्दै गएको छ । यसको अर्थ कम्पनीले स्मर्टफोनबाट हात झिक्ने तयारी गरेको भने होइन ।
तर, कम्पनीले आफ्नो इकोस्टिमलाई अझ बलियो बनाउँदै गएको छ । कम्पनीका अनुसार हार्मोनी ओएसले कम्पनीका सयभन्दा बढी प्रडक्टलाई सर्पोट गर्नेछ । भने, याे ओएसमार्फत यो वर्षको अन्त्यसम्म ३० करोड डिभाइस सञ्चालनमा आउनेछन् ।
वास्तवमा हार्माेनी अपरेटिङ सिस्टम स्मार्टफाेन, प्याड, वाच, टिभी, कार जस्ता स्मार्ट डिभाइसका लागि प्रयाेग गर्न सकिने विकास गरिएकाे छ ।
यसका लागि डेभलपरलाई यसमा आकर्षण गर्न जरुरी हुन्छ । तर, यसका लागि ह्वावेले धेरै नै फोकस गरिरहेको छ । यसको अर्थ कम्पनीले डेभलपरलाई विभिन्न अपरका साथै हार्मोनी ओएसमा काम गर्न सहजता प्रदान गरिरहको छ । डेभलपरले पनि आफ्नो लागि फाइदा हेर्ने हुँदा ह्वावेको हार्मोनीमा एप निर्माण गर्नसक्ने विज्ञ बताउँछन् ।
यी सबै कुरालाई आधार मान्ने हो भने ह्वावेले सार्वजनिक गरेको हार्मोनी ओएस भोलिका दिनमा अन्य अपरेटिङ सिस्टमका लागि एउटा महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा स्थापित हुने सक्ने देखिन्छ ।